C1: Barcelona-Manchester, boqortooyadii Isbaanishka ee hanjabaad? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » SPORTS C1: Barcelona-Manchester, boqortooyadii Isbaanishka ee hanjabaad?
C1: Barcelona-Manchester, boqortooyadii Isbaanishka ee hanjabay?
Hoggaanka Hore ee Champions League muddo shan sano ah, kubada cagta Spain ayaa hoos u dhacday? Kooxdiisii ​​ugu danbeysay ee Barcelona, ​​ayaa halis gelisay Talaadadii (21h00) by Manchester United, oo ah xubin ka mid ah afar Ingiriis ah kuwaas oo rajeynaya inay ruxaan boqortooyada Spain.
Sida iska cad, isagoo ka guulaystay Old Trafford lugtii hore (1-0), Barca hadlaya this tartanka labaad ee boos adag in ay dhex milmin qalcadda Camp Nou, halkaasoo Captain Lionel Messi iyo ciidamada uu lagama badin ee Europe tan iyo 2013 (27 badisay, 3 ayaa barbar dhigtay).
Laakiin Red Devils ayaan ka baqeyn dibedda, iyagoo ka careysnaa Paris SG ee Parc des Princes sideedaad (0-2, 3-1). Xaqiiqooyinka hore ee Real Madrid iyo Atlético ayaa u muuqda labo digniin: waa markii ugu horeysay tan iyo 2010 oo ah horyaalka La Liga hal hal wakiil oo ka mid ah quarter-finalka C1. Iskudhin halka finalka lagu ciyaarayo Madrid ... sida ku jirta 2010.
"Waxaan ka badbaaday kaliya ee La Liga Spain, waa wax sida caadiga ah ma," ayaa qirtay in tababaraha Barcelona ee Ernesto Valverde, shan sano 100% ku guuleystay guulo (afar C1 Real Madrid ka dib, mid ka mid ah Barca).
Xilli ciyaareedkan waxa, ka awood badan English Premier League ayaa soo baxday afar kooxood inay Yurub 8 top, horeysay tan iyo 2009. Iyo wakiilkiisa oo jidka Barça istaago, hadii kooxda Blaugrana guulaysta Manchester United, waxaa laga yaabaa in jareyso semi Liverpool, kuwaas oo qaatay doorasho cad inay FC Porto (2-0) tag. The final, ugu dhici khuseeyaan laga yaabaa in Tottenham, guuleystay Manchester City 1-0.
- Hispano-English Guéguerre -
Qeybta hoose ee Europa League, waxaan u dhaqaaqeynaa marka laga reebo semi-finalka iyadoo labo kooxood oo Ingiriis ah (Chelsea iyo Arsenal) iyo hal Spain ah oo Valencia ah.
"Ma ahan kabtan loo yiraahdo Premier League waa horyaal heer sarre oo heer sarre ah" ayuu yiri Valverde.
Halkaan waxaa dib loo soo nooleeyay halyeeyada Hispano-English ee loogu talagalay ciyaartoyda ugu fiican, koobabka ugu quruxda badan iyo talefishanka xuquuqda ugu caamsan. Meelahaas, Premier League ayaa bilawga bilawga ah (wareega 3,3 oo ah bilyan euro oo sanadkiiba la gooyey, oo lagu daray suuqa suuqyada gudaha iyo dibaddaba) marka la barbardhigo La Liga (ugu yaraan 2 bilyan euros).
Tani waxay xoog dhaqaale waa mid ka mid ah sababaha kor u kaceen xoog British laakiin aan ku xaddidnayn: opinion ee Zinedine Zidane, waa mid ka mid ah sidoo kale qirayaa ka qayb of farsamo qalaad loo yaqaan Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) iyo Mauricio Pochettino (Tottenham). Jose Mourinho ayaa lagu bedelay kursiga keydka ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.
- Zidane lama yaabin Ingiriisi -
"Waa ciyaar kubada cagta ah, ma iila yaabin inaan arko kooxaha ingiriiska" ayuu yiri tababaraha Faransiiska ee Real Madrid. "Sababtoo ah tababarayaasha ku jira madaxda kooxahaan waxay soo saaraan casriyadoodooda, aqoontooda, sida ay u kala duwan yihiin. Ururku wuu fiicnaan karaa. "
Zidane yeeri horraantii March dib u dhiska ee "Aqalka Cad", hase ahaatee waxaa ay hubisaa in kooxo Isbaanish ma tahay Dhammaadka wareegga ah, halka labada kooxood la dakhliga ugu sarreeya dunida oo Real iyo Barca waa, sida laga soo xigtay Deloitte.
"Kubadda cagta Spain weli waxay leedahay booskeeda, laga bilaabo sanadka soo aadan," ayaa uga digay xiddiga reer France. "Uma maleynayo in wareega Isbaanishka uu halis ku yahay."
Natiijada ka soo baxday Barca ayaa waajib ah inay xaqiijiso Talaadada Camp Nou si ay u gaaraan semifinal-ka ugu horeeya tan iyo 2015 oo ay tirtirto seddex guul darro oo isku xiga.
Aan kalsoonaan: ka dib hayso a "remontada" PSG ee 2017 (0-4, 6-1) ka dibna qaba sano ah ee ugu danbeysay ee Rome (4-1, 0-3), Catalans ay yihiin si wanaagsan ujooga ah ee Manchester United iyo xiddiga reer France Paul Pogba. Iyo cimri dhererka awoodda Isbahaysiga Isbaanishku waa mid khatar ah.
Halkan waxa laga soo xigtey: http://www.rfi.fr/defeche/c1-barcelona-manchester-empire-Spanish-sous-menace
Hadafyada 10 ee SALAH oo booqday World - VIDEO
CAF: Ahmad Ahmad ayaa ku dhacay fadeexad galmo halkan waa faahfaahin